Romafo 2:17-29, Romafo 3:1-8 NA-TWI | Biblica
Romafo 2:17-29, Romafo 3:1-8 NA-TWI
Mo Yudafo de, mususuw sɛ mo ne Onyankopɔn te no yiye so, efisɛ, ɔde ne Mmara a monam so benya nkwagye no maa mo. Na moka no mo ano fafa so nso se, moyɛ ne nnamfonom sononko bi. Munim nea Onyankopɔn hwehwɛ sɛ moyɛ. Moasua afi Mmara no mu ahu nea eye. Mofa mo ho sɛ moyɛ akwankyerɛfo ma anifuraefo, na moyɛ hann nso ma wɔn a wɔte sum mu. Mugye di sɛ mubetumi akyerɛ adwenemharefo ne mmofra Onyankopɔn akwan, efisɛ, nokwarem, munim ne Mmara a osuahu ne nokware ahyɛ no ma no.
Mokyerɛkyerɛ afoforo na adɛn nti na muntumi nkyerɛkyerɛ mo ho mo ho? Moka kyerɛ afoforo se wɔmmmɔ korɔn. Mobɔ korɔn no bi anaa? Moka se aguamammɔ nye. Mobɔ aguaman no bi anaa? Moka se, monnsom ahoni, na momfa ahoni ho mpɛ sika?
Mohoahoa mo ho yiye se munim Onyankopɔn Mmara no nanso monam Mmara no so bu so, bu no animtia. Ɛnyɛ nwonwa sɛ Kyerɛwsɛm no ka se mo nti, wiasefo kasa tia Onyankopɔn.
Sɛ woyɛ Yudani na wudi Onyankopɔn Mmara no so a, ɛyɛ ade a ɛsom bo. Na sɛ moanni so a, nsonoe biara nni mo ne abosonsomfo ntam. Sɛ abosonsomfo di Onyankopɔn Mmara so a, munnye nni sɛ ɔde nea ɛfata ne anuonyam a ɛfata a wabɔ ne tirim sɛ ɔde bɛma Yudafo no bɛma wɔn? Sɛ ɛba saa a, abosonsomfo no bɛkasa atia mo, agu mo, Yudafo a munim Onyankopɔn ho nsɛm no na wahyɛ mo bɔ nanso munni ne Mmara so no anim ase .
Fa a wɔde mo afa Yudasom mu atwa mo twetia, anaasɛ Yudafo na wɔwoo mo no nkyerɛ sɛ moyɛ Yudafo kann. Yudani kann no ne onipa a ne koma mu tew wɔ Onyankopɔn anim. Onyankopɔn nhwɛ twetiatwa ho na mmom ɔhwɛ wɔn a wɔn adwene ne wɔn koma asesa. Obiara a ɔwɔ saa adwensakra abrabɔ mu no, sɛ moankamfo no koraa a, Onyankopɔn bɛhyɛ no anuonyam.
Read More of Romafo 2
Na sɛ saa na ɛte de a, na Yudaniyɛ no ho mfaso ne dɛn? Onyankopɔn dom wɔn biribi sononko anaa? Biribi wɔ Yudafo twetiatwa no mu? Yiw, sɛ woyɛ Yudani a, ɛho wɔ mfaso bebree. Nea edi kan no, Onyankopɔn de ne mmara hyɛɛ wɔn nsa sɛnea ɛbɛma wɔayɛ n’apɛde. Ɛyɛ nokware sɛ na wɔn mu bi nni no nokware. Na di a na wonni Onyankopɔn nokware no kyerɛ sɛ obebu ne bɔ a wahyɛ wɔn no so anaa? Dabida! ɛwom sɛ obiara yɛ ɔtorofo de, nanso Onyankopɔn nyɛ ɔtorofo. Wokae nea oyi fii Israel Nnwom mu a ɛfa eyi ho a ɛka se, Onyankopɔn nsɛm bɛyɛ nokware daa no?
Na sɛ yɛn bɔne a yɛyɛ no da Onyankopɔn trenee adi kann a, yɛbɛka dɛn? Sɛ Onyankopɔn twe yɛn aso a, yɛbɛka se wayɛ bɔne?‘Mekasa sɛnea nnipa ka. Onyame mpa ngu! Sɛ Onyankopɔn nyɛ ɔtreneeni a, ɛbɛyɛ dɛn na watumi abu wiase atɛn? Sɛ mitwa atoro na ɔda no adi kyerɛ me de nya anuonyam a, ɛnne na ɔrentumi mmu me atɛn ntua me so ka. Adɛn nti na yɛnka se, “Momma yɛnyɛ bɔne na papa mfi mu mmra?” Nokwarem, nnipa bi nam saa asɛm koro yi ara so ayi me ntɛn nam so akasa atia me. Wobebu saa nnipa yi atɛn sɛnea ɛsɛ wɔn.
Read More of Romafo 3